कोरोनाबाट जनता जोगाउनु कि सरकारको कुर्सी – KhojPatrika
कोरोनाबाट जनता जोगाउनु कि सरकारको कुर्सी
By खोज पत्रिका	 October 30, 2020 0
यहाँ कोरोना नियन्त्रण भन्दा पनि सरकारलाई कुर्सी बचाउन यता जाउ कि उता जाउ भन्दैमा ठिक्क छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकसाता देखि निद्रा नै हराम भएको छ अरे । जनताको उपचारका लागि होइन अर्थतन्त्र खस्कियो त्यो पनि होइन अफनो कार्यकालमा विकासले फड्को मार्न सकेन त्यो त झन् हुँदै होइन । हो चाँही के त सुनौं । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकसातादेखि आफूसँग बालुवाटारमा ग्रीन टि, ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनर गर्न आएनन् भनेर । बालुवाटार भेट्न नआएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको निक्कै चित्त दुखेको छ अरे ।
त्यसैले त कहिले महासचिव बिष्णु पौडेल कहिले सुबासचन्द्र नेम्बाङ कहिले लुम्भिनी प्रदेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल त कहिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली आलोपालो गर्दै प्रचण्ड निवास खुमलटार फकाउन दौडधुप गरिरहेका छन् । प्रचण्ड ओलीसँग साह्रै रिसाएका छन् अरे अनि प्रचण्डलाई साथ दिन माधव कुमार नेपाल पनि अहोरात्र खटिएको कुरा त लुकाउनै परेन । कुटिल प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई फकाउन दुई पटक बालुवाटार बोलाइसके । तर, नेपाल मरे मान्दैनन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको टाउको दुखाई बनेको छ । कुरा मिल्यो पार्टी एकताका बाँकी काम छिट्टै पूरा हुने भयो भन्दै कुर्लिएका नेताहरु समेत चुपचाप छन् ।
करिव दुई सातासम्म नेकपामा बिवाद मिलेको चर्चा चल्यो । तर, फेरि उस्तै । एउटै पार्टीका दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै बिज्ञप्ती जारी गर्छन् निर्देशन पनि छुट्टाछुट्टै दिन्छन् तर, पनि पार्टी फुट्दैन ढुक्क हुनुहोस् भन्छन् । त्यसो भए यो गलफती के का लागि । नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद के हो एक पटक हेरौं ।
१.एक्लौटी रुपमा राजदुतको नियुक्ति
२. सल्लाह विनै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर
३.कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव
४.कर्णालीमा दाहाल र माधव कुमार नेपालको नयाँ समिकरण
५.कार्तिक ५ गते राती प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको २ घण्टा लामो गोप्य भेटवार्ता
६.पर्सा विन्दवासिनी गाउँपालिकाको सपथ कार्यक्रममा दुई पक्षीय झडप, कमिटी सचिव उमेश चौरसियाको हत्या प्रकरण
अव हेर्नुहोस् यी मैले नेकपाभित्रका विवाद सुनाउँदा जनताको पक्षमा अझ भनौं यो कोरोना महामारी नियन्त्रणमा भएको छलफलमा असहमति भएको कतै देख्नुभयो । जनताको जीवन बचाउन गरिने प्रयासमा कतै मतभेद देख्नुभयो ? छलफल भएको देख्नुभयो ? अह् यहाँ राजनीति फोहोरी खेल त्यसै भनिएको रहेनछ क्यारे ।
जनताले अस्पतालमा बेड नपाउँदा उपचार खर्च नपाएर छटपटाउदा कसैलाई वास्ता छैन् । प्रतिपक्ष कांग्रेस कोरोना लागेर आइसुलेसनमा बसे झै गुमनाम छ । जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरुको एक पटक अनुहार हेरौं र भनौं हाम्रा लागि तपाईले के गर्नुभयो । अस्पतालमा बेड नपाएर घरमै छटपटाउदा के हेर्नुभयो । अह यहाँ तपाई हाम्रो चिन्ता भन्दा कुर्सीकै चिन्ता छ ।
सरकारलाई कुर्सी बचाउन
अस्पतालले बेड लुकाउदा समेत कारवाही गर्दैन सरकार
दोश्रो तहका नेता अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डको खटपट मिलाउने दौडमा, फुटको संघारमा नेकपा
सिंहदरबारभित्रै नायव सुब्बाको आन्दोलन,यस्ता छन् मागहरु
By खोज पत्रिका 10 mins ago 0
२०७८ आसा र भरोसाको बर्ष बनोस्
By खोज पत्रिका 23 hours ago 0